Himalaya Dainik » सलमानसँग अभिनय गर्नु परेमा ऐश्वर्याको छ एउटा शर्त !
सलमानसँग अभिनय गर्नु परेमा ऐश्वर्याको छ एउटा शर्त !
९० को दशकमा बलिउड दबंग सलमान खान र ऐश्वर्या रायको प्रेम थियो । तर यो प्रेम पूरा हुन सकेन। भनिन्छ ऐश्वर्याको जीवनमा सलमान खानको अत्यधिक स्वामित्वपूर्ण व्यवहार र बढी हस्तक्षेपले उनीहरूको सम्बन्ध बिगार्‍यो। सलमान खान प्रायः ऐश्वर्याको फिल्मको सुटिङसम्म पुग्थे।
लामो समयसम्म उनीहरुको लभस्टोरीले सञ्चारमाध्यममा राम्रो चर्चा पाएको थियो । अहिले पनि बेलाबेलामा उनीहरुको लभस्टोरीको प्रसंग आउने गरेको छ ।
सन् १९९७ मा उनीहरुबीचको सम्बन्ध शुरु भएको थियो । । त्यतिबेला सलमान खान पाकिस्तानकी सोमी अलीसँग प्रेम सम्बन्धमा थिए । ऐश्वर्याले विश्व सुन्दरीको अवार्ड जितेपछि सलमानलाई उनी निकै मन परेको थियो । जसको कारण उनले सोमीलाई ब्रेकअप दिए ।
संजय लीला भंसालीले सलमानको आग्रहमा ‘हम दिल दे चुके सनम’मा ऐश्वर्यालाई अभिनयको अवसर दिएका थिए । यो फिल्मको शुटिङको क्रममा उनीहरुको बीचमा प्रेम सम्बन्ध स्थापित भएको थियो ।
उनीहरुको बीचमा धेरै विवाद तथा झगडा भए । ऐश्वर्याले सलमानलाई गाली गरेको र मारपीट गरेकोजस्ता धेरै आरोप लगाइन् र त्यसपछि ऐश्वर्याको सम्बन्ध टुट्यो र पछि अभिषेक बच्चनसँग बिहे भयो। सलमान खान भने अझै अविवाहित छन्।
यो जोडीलाइ दर्शकले निकै मन पराएका थिए । यी दुइको बिवाह नै होस भन्ने चाहाना धेरै फ्यानको थियो । तर पनि त्यो सम्भव भएन । यी दुइको बिवाह नभएपनि फिल्ममा सँगै देख्न चाहाने दर्शकको संख्या निकै ठुलो छ ।
र पछिल्लो समय यी प्रेमिल जोडि पुन: पर्दामा देखिने सम्भावना बढेको बताइएको छ । ऐश्वर्याले एक अन्तर्वार्तामा सलमानसँग अभिनय गर्न कुनै अफ्ठ्यारो नरहेको बताएकी थिइन‍् । ‘यदि मलाई यस्तो अफर आएमा म विचार गर्ने छु, मलाई सलमानसँग अभिनय गर्न कुनै अफ्ठ्यारो छैन ।’ ऐश्वर्याले भनेकी थिइन् ।
तर यसको लागि ऐश्वर्याले एउटा सर्त राखेकी छन् । यसको लागि मेरो एउटा सर्त छ कि म चलचित्रको स्क्रिप्ट र निर्देशक सहि भएमा मात्र सलमानसँग अभिनय गर्नेछु । ऐश्वर्याको सो अभिव्यक्ति प्रति सलमानले कुनै प्रतिकृया दिएनन् ।
यस्ता गुण भएकी नारीले घरलाई बनाउँछन् स्वर्ग
बलिउड यी १२ सेलीब्रेटीको यस्तो छ आँसु झार्ने प्रेम कहानी [तस्बिरसहित]
नेपाली १३ नायिकाको तिज बिशेष [फोटो फिचर]
बिन्दास वर्षा [फाेटाे फचिर]
पत्नी र पैसा लुटिएका एक सिपाहीको कारुणिक पीडा
श्वेता खड्का पनि देखिइन् बाेल्ड लुक्समा, हेराैँ १३ तस्विर